विज्ञहरुको सुझाव : सुन्दरबजार नगरपालिकालाई साँच्चिकै ‘सुन्दर’ बनाउन कृषि र पर्यटनको विकासमा लाग्नुस् | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
विज्ञहरुको सुझाव : सुन्दरबजार नगरपालिकालाई साँच्चिकै ‘सुन्दर’ बनाउन कृषि र पर्यटनको विकासमा लाग्नुस्
साउन २७, २०७५ आइतबार २०:१७:५ | श्यामशितल परियार
लमजुङ – लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकालाई सुन्दर बनाउन कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
‘सुन्दरबजार नगरपालिका र विकास’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सुन्दरबजार नगरपालिकाको गुरुयोजना बनाउनु पूर्व विज्ञहरुको राय लिनका लागि नगरपालिकाले काठमाडौँमा विज्ञसहितको छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
नगरपालिकाका अनुसार छलफलमा विशेषगरीः जन्मथलो सुन्दरबजार नगरपालिका रहेका काठमाडौँमा बस्दै आएका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु सहभागि थिए । लमजुङ र छिमेकी जिल्ला तनहुँका केही विज्ञहरु समेत छलफलमा सहभागी भएका थिए ।
कृषि विज्ञ सूर्यबहादुर सिंहले सुन्दरबजार नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि र पर्यटन विकासको उच्च सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यहाँ उर्वभरभूमी जमिन प्रशस्त छन् । सिँचाईका लागि नदीनाला छन् । तर गाउँघरका जग्गा जमिन बाँझै छन् । आशातित रुपमा कृषि क्षेत्रको विकास भएको छैन । यहाँ ऐतिहासिक एवम् धार्मिक क्षेत्रहरु छन् । कृषि र पर्यटनको मात्रै विकास गर्न सके सुखी नगरबासी, समृद्ध सुन्दरबजार नगरपालिका बनाउन सकिन्छ,’ उहाँले आफ्नो राय राख्नुभयो ।
युवालाई गाउँमै राख्न सके मात्रै कृषि विकासको परिकल्पना गर्न सकिने उहाँको धारणा छ । उहाँका अनुसार सबैभन्दा पहिले बजार खोजी व्यावसायिक कृषि कर्ममा जुट्नु आवश्यक छ ।
संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगले मात्रै कृषि क्षेत्रको विकास गर्न नसकिने हुँदा दातृ निकायको पनि सहयोग भित्र्याएर नगरपालिकाले कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
पूर्व सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले सुन्दरबजार नगरपालिका लोक सँस्कृति, कृषि, शिक्षाका दृष्टिले अग्रणी ठाउँ रहेकाले यहाँ पर्यटन विकास गरी नगरपालिकाको मुहार फेर्न सकिने तर्क राख्नुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले नगरपालिकाको समृद्धिको आधार नै कृषि रहेको धारणा राख्नुभएको छ ।
बञ्जर रहेका यहाँका उर्वरभूमीलाई हराभरा पार्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनातर्फ पनि नगरपालिकाको ध्यान खिचिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका हरिबहादुर केसीले नगरपालिकाले कृषि र वन उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिनुभएको छ । योजनाविद् डा. पूर्णकान्त अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाई यहाँको विकास गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
पुनर्निर्माण विज्ञ विष्णु अधिकारीले नगरपालिकाले साना उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगीलाई सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नदीले बेरिएको, उर्वरफाँट रहेको, ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रहरु रहेको बताउँदै सुन्दरबजारको विकासमा आफुले आफ्नो सीप, क्षमता खर्चिने धारणा राख्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम्् नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सुन्दरबजार आफैँमा विकासको सम्भावना बोकेको नगरपालिका रहेको बताउँदै यसको श्रीवृद्धिमा आफुले हरदम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममै राष्ट्रियसभा सदस्य ईन्दु कडारिया, जिसस लमजुङका संयोजक लोकराज पाण्डे, पूर्व सांसद डा. भीष्मनाथ अधिकारी, काशिनाथ अधिकारी, भुगोलविद् हरिप्रसाद भट्टराई लगायतले आ–आफ्नै धारणा राखेका थिए ।
विभिन्न कठीनाई भएता पनि सुन्दरबजारलाई सुन्दर बनाउनका लागि विज्ञबाट प्राप्त अमूल्य रायलाई समेट्दै नगर विकासमा जुट्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज गिरीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्य समितिका उपसंयोजक धनकुमारी तामाङ, नगरकी उपप्रमुख ज्ञानु शाह लगायतका नगर कार्यपालिकाका सदस्य, वडाअध्यक्ष, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो ।